Stalactites na stalagmites: kedu ihe ha bụ na otu esi akpụpụta ha | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie oge ụfọdụ na ndụ gị ị gara n'ọgba. Ogba mara mma, na-adọrọ mmasị ma dị iche iche gburugburu ụwa ebe anyị nwere usoro ihe omimi nke ụwa. N'ime ọgba anyị nwere ike ịmasị ụfọdụ usoro okike dị ịtụnanya maka ịma mma na ịpụ iche ha. A na-akpọ usoro a stalactites na stalagmites. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere usoro mbara ala ndị a dị ka ezigbo ọrụ nke ọrụ okike. Ọ bụ ihe kwesiri ịmara ma ọ bụrụ na ị hụbeghị ya mbụ, ọ ga-eju gị anya.
Ma olee otu stalactites na stalagmites si dị iche? Olee otú ha si kpụrụ? Anyị ga-aza ajụjụ ndị a niile n’isiokwu a.
1 Gịnị bụ stalactites na stalagmites
4 Etu esi etolite stalactites na stalagmites
5 Ebee ka ihu usoro ndia
Gịnị bụ stalactites na stalagmites
Ọ bụ ezie na o nwere aha yiri ya, e nwere nnọọ ezigbo ọdịiche dị n’etiti ha. Nhazi ya na nhazi ya dị iche. Stalactites na stalagmites nwere otu ihe: ha bụ speleotomes. Echiche a na-ezo aka n'eziokwu bụ na ha bụ ihe nkwụnye ego nke etolite n'ọgba mgbe emechara ha. Speleotomes na-ebili n'ihi mmiri ozuzo na-ebilite n'oge e guzobere ihe siri ike site na ngwọta.
Ma stalactites na stalagmites sitere na calcium carbonate ego. Nhazi ndị a na-adị na oghere nzu. Ọ pụtaghị na ọ bụghị ikpe ebe ọ nwere ike na-etolite na ụfọdụ keakamere ma ọ bụ anthropic cavities cnke sitere na nkwụnye ego ndị ọzọ dị iche iche.
Isi ihe dị iche n'etiti usoro abụọ a bụ ọnọdụ. Onye ọ bụla nwere usoro dị iche iche dị iche karịa nke ọzọ, ya mere, ọnọdụ ya n'ime ọgba na-agbanwekwa. Anyị ga-enyocha nke a nke ọma, na-akọwa ihe nke ọ bụla bụ.
Anyị na-amalite site na ịmalite nke sitere n'elu ụlọ. Uto ya na-ebido n’elu ọgba ahụ wee gbadaa ala. Mmalite nke stalactite bụ dobe nke mineralized mmiri. Ka mmiri na-ada, ha na-ahapụ ụdị nke calcite n'azụ. Calcite bụ ịnweta nke nwere calcium carbonate, nke mere na ọ na-ebute ịkpọtụrụ mmiri. Kemgbe ọtụtụ afọ, mgbe ọdịda nke ịnweta mmiri na-ada, a na-etinyekwu nchịkọta na-agbakọta.
Mgbe nke a juru, anyị na-ahụ na ọ na-ebuwanye ibu ma na-enwe ụdị dị iche iche. Dị kachasịsịsịsị bụ ụdị cone. Ihe a na-ahụkarị bụ ịhụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke cones calcite na mmiri na-esi n'uko ụlọ. Ogo nke cones na-adabere na mmiri nke mmiri na-asọgharị na mpaghara ahụ na oge a na-asọba mmiri na-adọkpụpụta ahụ.
Enwere ike ịsị na stalactites bụ usoro okike nke sitere na elu ruo ala. N’etiti stalactite, enwere uzo nke mmiri na-aga n’ihu na-ekesa. Ọ bụ ihe a mere ka ha dị iche na usoro ihe ọmụmụ ndị ọzọ nwere ọdịdị yiri ya.
Anyị na-aga n'ihu ịkọwa stalagmites. N'aka nke ozo, ha bu usoro ndi sitere na ala ma too elu. Dị ka ndị gara aga, stalagmites na-amalite ịmalite site na dobe mineralized na calcite. Ọdịda ndị a na-adaba na-agbakọba ego ole na ole. Formdị ebe a nwere ike ịdị iche karịa ebe ọ bụ na ha enweghị ọdụ ụgbọ mmiri dị ka stalactites nke tụbara mmiri na-agbasa n'ihi ike ndọda.
Otu ihe dị iche bụ na ha buru oke ibu karịa stalactites. N'ihi usoro e guzobere, stalagmites nwere ọdịdị dị gburugburu karịa ọdịdị cone. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị bụ ịhụ ụfọdụ nwere usoro na-enweghị usoro. Dị ndị a na-ahụkarị bụ ụdị ụdị tubular ndị a na-akpọ macaroni. Commonzọ ndị ọzọ dị iche iche bụ conulitos (ha nwere nhazi dịka oghere dị egwu), pel (nke nwere ọdịdị gbara gburugburu) na ụfọdụ ndị ọzọ.
Stalactites na stalagmites na-echekarị ihu. Ọ na-ahụkarị ịhụ stalactite n'elu ma daba n'akụkụ ya stalagmite. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na tụlee ndị na-adọta site na stalactite nwere akara nke calcite nke edebere na ala iji mepụta stalagmite.
Etu esi etolite stalactites na stalagmites
Anyị ga-enyocha usoro nhazi nke nkwụnye ego abụọ. Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ usoro mmiri ozuzo na-eme ha. A na-agbaze mineral ndị na-adọta mmiri n'ime mmiri. A na-emepụta usoro ndị a n'ihi na CO2 nke etisasịwo na mmiri mmiri ozuzo na-emepụta calcium carbonate mgbe ọ bịara na kọntaktị na nkume nzu. Dabere na ọchịchị mmiri ozuzo na ọkwa nke ịbanye n'ime mmiri, usoro ndị a ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụ mmiri mmiri ozuzo nke na-asọda n'ala ma na-agbaze nkume nzu nzu. N'ihi ya, mmiri ndị a na-enye ọdịdị ndị a ego. Calcium bicarbonate dị ezigbo mmiri na mmiri ma bụrụ nke a kpụrụ mgbe emetụ CO2 nke mmiri ozuzo na-eweta. Bicarbonate a na-emepụta ọpụpụ ebe CO2 gbapụrụ nke, mgbe ọ na-emeghachi omume, na-ebute n'ụdị calcium carbonate.
Carbon carbonate na-amalite imepụta ụfọdụ ihe dị n'akụkụ ebe ọdịda ahụ dara. Naanị nke a na-apụta na stalactites, ebe ọdịda na-ada n'ihi ike ndọda nke na-amanye ha ịda n'ala. N'ihi ya, ụmụ irighiri mmiri ahụ na-awụpụ n’ala.
Ebee ka ihu usoro ndia
Will ghaghi inwe obi uto ma oburu na ihubeghi usoro ndia tupu oge a (nke adighi ama). Otú ọ dị, anyị ga-agwa gị ebe ị nwere ike ịchọta usoro stalactite na stalagmite kachasị ukwuu.
N'ịbụ onye dị nwayọ nwayọ, n'ihi na ha ka ha na-eto naanị otu inch n'ogologo, ọ na-ewe ihe 2,5 ka 4.000 afọ. Enwere ike ịchọta stalactite kachasị ukwuu n'ụwa n'ọgba nke Nerja, nke dị na mpaghara Malaga. Ọ dị mita 60 n’obosara na mita 18 n’obosara. O were afọ 450.000 iji mepụta kpamkpam.
N'aka nke ọzọ, nnukwu stalagmite n'ụwa bụ mita 67 n'ịdị elu ma anyị nwere ike ịchọta ya n'ọgba Martín Infierno, na Cuba.
Enwere m olileanya na ozi a emeela ka ị chọọ ịmata ihe banyere stalactites na stalagmites.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Stalactites na stalagmites